Ra'iisal wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo u dhoofay Boqortooyada Sacuudiga - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo u dhoofay Boqortooyada Sacuudiga
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo u dhoofay Boqortooyada Sacuudiga
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u dhoofay dalka Sacuudiga, kadib casuumaad uu ka helay Boqorka dalkaasi Salman bin C/casiis oo diyaarad gaara u soo diray.
Wararka ayaa sheegaya in Wafdiga Ra’iisul wasaare Kheyre ay dalka Sucuudiga kula kulmi doonaan madaxda dalkaasi oo uu ka mid yahay boqor Salmaan iyo dhaxalsugaha Mohamed Bin Salman, iyadoo socdaalkiisu qaadan doono mudo laba maalmood ah, waxaana ku wehliya wasiirrada arrimaha dibadda, iyo ganacsiga, warfaafinta iyo xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka.
Wasiirka warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in Ra’iisul wasaare Kheyre iyo madaxda dalka Sucuudiga ay yeelanayaan kulamo looga hadlayo xoojinta xariirka walaaltinimmo ee labada dal ka dhexeeya, isbedellada gobalka iyo guud ahaan caalamka.
Ra'iisal wasaare Kheyre oo markii labaad Maalmo gudahood kormeer ku tegay Wasaaradda Warfaafinta
Dowladaha Soomaaliya iyo Germany oo kala saxiixday Heshiisyo horumarineed
Madaxda Tigreey oo magacaabay Ergo wadahadal la gasha DF Itoobiya